Akwụkwọ kacha mma maka njem | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Berkwụ Alberto | | ọtụtụ
Anyị na-emeghe akwụkwọ n'ihi na anyị kwesịrị ibufe onwe anyị na ebe na ọnọdụ ndị ọzọ, iji zere eziokwu site na mkpụrụedemede anyị na-ewere dị ka ndị enyi na akụkọ anyị nwere ike iche na amata anyị. Mana, enwekwara ụfọdụ akwụkwọ nke ebumnuche ha bụ ka anyị gaa mba ọzọ n’ụwa n’enweghị azụrụ tiketi otu ụzọ. Ndị a akwụkwọ kacha mma maka njem ha na-abụrụ ihe mkpuchi anwansi zuru oke nke ha ga-abanye n'ime ihe omimi nke Asia, ụzọ ndị United States ma ọ bụ akụkọ ọdịnala Spanish.
1 Akwụkwọ kacha mma maka njem
1.1 Na ụzọ, n'aka Jack Kerouac
1.2 India: Mgbe Million Riots gasịrị, site na VS Naipaul
1.3 Kwupụta anụ ọhịa, nke Jon Krakauer dere
1.4 Rie, Kpee ekpere, na byhụnanya nke Elizabeth Gilbert dere
1.5 Otu narị Miles si Manhattan, nke Guillermo Fesser dere
1.6 Party, nke Ernest Hemingway dere
1.7 The Traveler's Tao, nke Paul Theroux dere
1.8 Anụ ọhịa, nke Cheryl Strayed
1.9 Site n'akụkụ Oké Osimiri Cortez, nke John Steinbeck dere
Na ụzọ, n'aka Jack Kerouac
Edere ya naanị izu atọ na mpempe akwụkwọ na-enweghị oke ma ọ bụ oghere, Na ụzọ, nke e bipụtara na 1957, ghọrọ ngwa ngwa ẹphe aphụ ẹphe. Ndị na-eto eto sitere na 50s na-emeghe echiche ọhụrụ na ụdị ndụ ndị achọtara na akụkọ akụkọ akụkọ a bụ ihe ngọpụ zuru oke iji soro Kerouac gafee United States na Mexico, mba ndị otu n'ime ndị edemede kachasị ike na narị afọ nke 1947 gara n'etiti 1950 na XNUMX.
Banyere ndị nne na nna Hindu mana amụrụ na Port nke Spain, na Trinidad na Tobago, Naipaul mere njem gaa mba nna nna ya iji kụọ ya n'akụkụ nile nke akwụkwọ a, eserese nke India ahụ nwere ọgba aghara na nke ime mmụọ. , ebe akụkụ dị ka ọrụ ụmụ nwanyị, ụlọ ọrụ Bollywood ma ọ bụ esemokwu dị n'etiti ndị Hindu na ndị Alakụba na-abịakwute ndị Nobel chọr'inwe na Akwụkwọ site n'egwuregwu na ịdị nro nke ndị na-emeghe anya ha n'ala nna jupụtara n'ọtụtụ nuances. Obi uto nye ndi huru ala nke curry, yoga na Taj Mahal.
Ọ ga-amasị gị ịgụ VS Naipaul India?
Kwupụta anụ ọhịa, nke Jon Krakauer dere
Na-emegharị ihe nkiri na 2007, Kwupụta ụzọ ọhịa bụ Ihe ndekọ onwe onye nke Chris McCandless dere nke Jon Krakauer dere, onye dị afọ 24 nke n’afọ 1992 kpebiri ịhapụ ụgbọ ala ya ma kwaga n’ala mmegide nke Alaska na-achọ ịnabata ụzọ ndụ gbagọrọ agbagọ. A hụrụ ozu nwa okorobịa ahụ ka ọnwa na-adịghị ndụ gasịrị, na-ebute echiche dịgasị iche n'etiti ndị masịrị ikike McCandless ịhapụ usoro a wee chụsoo ụzọ ndụ nke aka ya, yana ndị hụrụ na njide ya, omume amaghị nke ọma na iwu nke okike ...
Rie, Kpee ekpere, na byhụnanya nke Elizabeth Gilbert dere
Mgbe ịgba alụkwaghịm na obi mgbawa gasịrị, onye odeakụkọ Elizabeth Gilbert hụrụ onwe ya n'okporo ụzọ gafere nke na-enweghị ihe ime mmụọ na mkpa. Nsogbu dị adị nke o kpebiri idozi njem ịga .tali, ebe o riri ihe nile o nwere ike, India, mba nke ọ mikpuru amamịghe ihe ime mmụọ ya, ma ọ bụ Bali, ebe ọ nwara ịnabata nchikota nke echiche ya niile. Nkatọ nke ndị na-ele akwụkwọ a anya dị ka "akwụkwọ ntuziaka maka ndụ na-agwụ ike, ụmụ nwanyị posh," mana ndị na-ahụ ọrụ Gilbert dị ka mmụọ nsọ, rie, Kpee ekpere, na Lovehụnanya ka emegharịrị n'ime ihe nkiri na 2010 nke Julia Roberts na-eme.
Relámete na Rie, kpee ekpere ma hu n'anya.
Otu narị Miles si Manhattan, nke Guillermo Fesser dere
Onye ndu ndi oru nta akuko ebe ha di, Fesser agwala anyi akuko maka 25 afọ site na Gomaespuma kamakwa site na akwukwo di nma dika nke a.Otu narị kilomita site na Manhattan. N'ịbụ nke ndị edemede dị iche iche na akụkọ nke ha dere, onye edemede ahụ na-ewebata anyị na nuances dị iche iche, site n'ememe ohu ruo oge nke oge, site na mba jupụtara na charisma na ịma mma nke karịrị akara nke ụwa niile na-atụle mgbe niile. otu n’ime mba kachasị ike n’ụwa.
Party, nke Ernest Hemingway dere
Laa azụ na 1926, Spain bụ mba nke ụwa chefuru, na-enweghị atụ nke narị afọ ndị gara aga. Onye na-ede akwụkwọ na-eme njem, Hemingway kọrọ na Fiesta njem nke otu ndị America na ndị England si Paris gaa Pamplona, ​​ebe ndị ama ama Ememe San Fermin ha ghọrọ ihe nnọchi anya edemede nke Spain maka ọgbọ na-egosipụta ọnya nke Agha Worldwa Mbụ. N'ezie, Pamplona bụ ode n'onwe ya n'aka onye edemede nke Old Man and the Sea na Snows nke Kilimanjaro.
The Traveler's Tao, nke Paul Theroux dere
Weere dị ka otu n'ime ndị kacha mma na-ede akwụkwọ njem nke oge a, Theroux wee bụrụ onye ama ama na 1976 site na mbipụta nke Great Railway Bazaar a tụrụ aro, ọrụ nke na-esochi aha ndị ọzọ dị ka Tao nke onye njem. N'ihe banyere nkà ihe ọmụma ama ama nke China, Theroux jiri afọ iri ise ọ gara mee ihe iji nye anyị nke a Akwụkwọ ndị njem nke onye edemede na-agwakọta ndị edemede nke kpaliri ya ịmalite njem ya (site na Mark Twain ruo Ernest Hemingway), yana ntụgharị uche dị iche iche ma dị ike nke ga-egosipụta mmụọ njem ahụ ị na-ebu n'ime. Ihe niile na-atọ ụtọ.
Anụ ọhịa, nke Cheryl Strayed
N'ihe nke ịgba alụkwaghịm, ọnwụ nke nne ya na ọgwụ ọjọọ riri ya ahụ, na 1995 onye American Cheryl Stray kpebiri ịmalite njem nke naanị gaa njem karịrị puku kilomita 4 site na Massif Pacific Trail nke gafere California niile. Ojiri akpa na akpa oats, Strayed mechara chọpụta onwe ya n'etiti ọdịdị nke mmụọ nke oge gara aga na-echere n'okporo ụzọ ọ bụla. Dị ọcha n'ike mmụọ nsọ maka obere awa na-agụ akwụkwọ.
Anụ ọhịa bụ otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ na-akpali mmụọ nsọ.
Site n'akụkụ Oké Osimiri Cortez, nke John Steinbeck dere
Na March 1940, ka Europe na-akwado maka Agha Warwa nke Abụọ, Steinbeck kpebiri ịga njem nke ọ tụsiri anya ya ike. Ya na enyi ya, bụ ọkà mmụta ihe banyere ndụ bụ Ed Doc Ricketts, onye edemede nke Pearl malitere njem nke 4 puku kilomita na-amalite site na Monterrey na ókèala Baja California ruo mgbe ị banyere Oké Osimiri Cortez a na-amaghị mgbe ahụ. Njem ahụ mere n'ime ụgbọ mmiri a na-akpọ sardine nke a na-akpọ Western Flyer nke onye edemede ahụ dere na ọ ga-aghọ otu n'ime akwụkwọ njem kacha atọ ụtọ na narị afọ nke XNUMX.
Ọ ga-amasị gị ịgụ N'akuku oké osimiri Cortez?
Gini bu akwukwo kachasi nma diri ndi njem?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Akwụkwọ kacha mma maka njem